Location: musha » Kutumira » Enda » EU 100: Europe maererano (100) vagari
EU 100: Europe maererano (100) vagari
Mumavhiki mashoma anotevera, vagari zana kubva kumatunhu ese eBelgium vachashanda pamwechete kutsanangura zvavanoda uye zvirevo nezveramangwana reEuropean paCitizen Forum yekutanga paEU: "EU-100: Europe yevagari". Chirongwa ichi chinopera neMusangano wekupedzisira musi wa 100 na 18 Mbudzi paSeneti building. Sangano reCitizen riri paEU rakarongwa neEuropean Movement muBelgium mukubatana pamwe, pakati pevamwe, Europe Direct Bruxelles, inova chikamu chakakosha chekushanya kuBrussels.
Europe iri pakati pekuchinja kukuru, uye panguva ino izwi revagari vayo rinofanira kunzwikwa. Dambudziko rekutama nekutizira, kutyisidzira kuri kuwedzera kwevagandanga, kusadzikama kwevavakidzani vedu, kuomesa mutemo wezvekunze weRussia pamwe nesarudzo yeUnited Kingdom yekusiya EU zvaratidza kusakwanisa kwemasangano azvino eEuropean ekugadzirisa matambudziko anhasi. Maitiro ekuvandudzwa kweEU anozopinza giya repamusoro mumwedzi nemakore anotevera. Uye kubudirira kwayo kunoenderana nekugona kwayo kuratidza izvo chaizvo zvinotarisirwa zvevagari veEU.
Izvo chete nekuuya pamwe chete muchimiro chemasangano evagari vemo vanhu ndipo pavanozogadzira nzvimbo munzvimbo yekukakavara. Sangano reCitizen riri paEU rinovavarira kurega vagari zana veBelgium kuti vataure nezvenyaya yeramangwana reEuropean Union uye voita sebhodhi rekuti izwi ravo rinzwike. Yakafungidzirwa seyakavhurika uye inosanganisirwa foramu yekukurukurirana, iyo foramu inobvumidza vatori vechikamu kuti vaise pamberi zvishuwo zvavo nenzira yehumwe hurongwa.
Nechinangwa chekusimudzira kuchinjaniswa kwemazano uye nhanho yepamusoro yekutora chikamu, nhaurirano dziri kutora nzvimbo nekuda kwepuratifomu yepamhepo yakanyatsogadzirirwa chirongwa ichi. Musangano wekupedzisira unobvumidza vatori vechikamu kusangana mumunhu kuti vaenderere mberi nekutora kweCitizens Chiziviso uye vopa zvirevo zvavo kuzviremera nevamiriri vakasarudzwa veBelgian.
European Movement muBelgium, nerutsigiro rwevamwe vayo muBelgium (Europe Direct, BXFM, iyo
Seneti neVadiki veEuropean Federalists Belgium) uye muEurope (Union of European Federalists uye Spinelli Boka), zvichaunza meseji yevagari veEuropean veBelgium kumasangano eBelgian neEuropean uye vachashandisa zvese zvinokwanisika kubatana nemamwe akafanana zvirongwa zvinobuda muEurope yese.
Qatar Airways inohwina mubairo we 'Best Airline'
W Hospitality Boka: Kuperevedza kusingaperi mukuwaniswa kwemahotera muAfrica yese